Blog of prettygloria / အခမဲ့ Video ChatConferendo
4/5/2012 တွင် တင်ထားသည်။
တကယ်လို့..နင်သာဆွဲထားခဲ့ရင် ငါနင့်ဘေးမှာ ရှိနေချင်ခဲ့တာပါ.... တကယ်လို့...နင်သာတားခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါနင့်ဘေးက ထွက်မသွားချင်ခဲ့တာပါ... တကယ်လို့...နင်သာဆန္ဒရှိခဲ့ရင် ငါနင့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာချင်ခဲ့တာပါ.... တကယ်လို့...နင်သာသေချာခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါနင့်ဘေးကို လာချင်ခဲ့တာပါ... တကယ်လို့....နင်သာနားထောင်ချင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါနင့်ဘေးမှာ ပြောလိုက်ချင်ခဲ့တာပါ "ငါနင့်ကို သတိရနေမယ်နော်"
8/30/2011 တွင် တင်ထားသည်။
ထာဝရ သူငယ်ချင်း ထာဝရ အဖော်
8/19/2011 တွင် တင်ထားသည်။
Tags:ထာဝရ သူငယ်ချင်း ထာဝရ အဖော်
အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ...ငါ တစ်ယောက်တည်း...ဒါပေမယ့်... အထီးကျန်ခြင်းက...ငါ့ဆီ အလည်မလာဘူး..။ငါ့ အိမ်ခန်း ရှေ့မှာ ...ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့..ချောင်းကလေး... လှမ်းမြင်နေရတယ်... မင်းဟာ ...ငါ့ သူငယ်ချင်းပဲပေါ့....တောအုပ်ကလေးက...မင်းရဲ့အနားမှာ...စိမ်းစို ယိမ်းနွဲ့လို့... မင်းကို ကြည့်လိုက်တိုင်း...မင်းရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရှင်သန်စီးဆင်းမှုဟာ... ငါ့ဆီကို စီးကူးလာနေတယ်...ကျေးဇူးပါ..သူငယ်ချင်း...။။လေပြေညင်းကလေး...ချောင်းကလေးကို ဖြတ်သန်းပြီး...ခွင့်မတောင်းဘဲ...တိုးသက် ညင်သာစွာနဲ့...ငါ့ဆီ ...မင်းအလည်လာတယ်... ငါ့ကို နှုတ်ဆက် နမ်းရှိုက်ပြိး...ငါ့ဆံနွယ်တွေကို ဆော့ကစားတယ်... လတ်ဆတ်အေးမြတဲ့ ရနံ့ကို လက်ဆောင်..အဖြစ်..ယူလာသေးတယ်...ကျေးဇူးပါ...သူငယ်ချင်း...။။။နေမင်းကြီးက...ငှက်ကလေးတွေ တေးဆိုတဲ့ မနက်ခင်းမှာ... သူရဲ့ ရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေကို ငါ့အိပ်ခန်းအထိ ဖြန့်ကျတ်...အိပ်မောကျနေတဲ့...ငါ့ မျက်ဝန်းတံခါးတွေကို လာခေါက်တယ်... ကျေးဇူးပါ...သူငယ်ချင်း ရေ...တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းဖို့ ...နွေးထွေးမှုနဲ့ခွန်အားတွေ..လာပေးတဲ့ အတွက်ပေါ့....။။။။ လမင်းကြီးရေ...ငါ့ရဲ့ နေမင်းကြီး နှုတ်ဆက်အပြန်မှာ...မင်းထွက်ပေါ်လာပြီး..အေးမြတဲ့ အလင်းရောင်တွေနဲ့ တစ်နေ့တာ ဘ၀..အမောတွေကို ဖြေဖျောက် ပေးပြန်တယ်...ကျေးဇူးပါ...သူငယ်ချင်း....။။။။။ကြယ်ကလေးတွေ...လမင်းကြီး အလည်လွန်တဲ့...ညတွေမှာ... မင်းတို့တွေက ``မှိတ်တုတ်´´ ``မှိတ်တုတ်´´နဲ့ ...ငါ့ကို အားပေးစကား တီးတိုးပြောနေသယောင်... စစ်မှန်တဲ့ (သူငယ်ချင်း/အဖော်) ကောင်း ကိုတောင်းတနေတဲ့....ငါ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ အောင်... တခါတရံ မှာ...လှပတဲ့ အလင်းတန်းတွေနဲ့... ကြွေ လွင့် ပေးကြသေးတယ်နော်....။။။။။။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ.......ငါ့ဆီကို ...အထီးကျန်ခြင်းတွေ... အလည်..လာလို့မရအောင်... မင်းတို့တွေက...အဖော်ပြုပေးကြတယ်နော်...သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ...ပေးဆပ်ခြင်း သာရှိပြီး...တုံ့ပြန်မှု ...တစုံတရာကို ...မမျှော်လင့်တက်ကြတဲ့... ဖြူစင်..မွန်မြတ် တဲ့ ခင်မင်မှုကို..`` ထာဝရ´´...ကျေးဇူး တင်နေမှာပါ...။။။။။။။ငါ့ဖက်က ..ပြန်ပေးနိုင်တာ က....သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး....``ထာဝရ´´ တည်တံ့ပြီး...ကျန်းမာ..ပျော်ရွှင် စေကြောင်း...တောင်းဆု မေတ္တာ တစ်ခု.... ငါ့ အသက်...ရှင်သန်နေသရွေ့...ပေးဝေေ နပါရစေ....။။။။။။။။
တချို့က အချစ်ကို ဒီလိုပြောကြတယ်
Tags:တချို့က အချစ်ကို ဒီလိုပြောကြတယ်
(၁) လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပျော်ရွှင်ရမယ်။ ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်သလို သူ့အတွက်လဲ ပျော်ရမယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့လူဟာ အလှပဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆွဲဆောင်မူ အ ရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မေ့လျော့ခြင်းကို လက်ကိုင်ထားလို့။ မိန်းကလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မှတ်သားခြင်းကို လက်ကိုင်ထားလို့။ ............Socrates(၂) လင်မယားဆိုတာ ကပ်ကြေးတစ်လက်နဲ့တူတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ အသွား နှစ်ခုဟာ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေပါစေ ကြားဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ အသွားနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီး ညှပ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။..S. Smith(၃) လူငယ်တွေရဲ့ အိပ်မက်ဟာ အချစ်၊ ငွေကြေးနဲ့ ကျန်းမာရေးတဲ့။ ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေးနဲ့ အချစ်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာကို သူတို့ သတိပြုမိကြလိမ့်မယ်။.....Paul Jiruidi(၄) မိန်းကလေးတွေဟာ စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကို လျစ်လျူရှူထားတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ပြောရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောတယ်။ သူတို့ကို ပျော်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ဆိုရင် အသံတိုးတိုးနဲ့ ပြောတယ်။ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေးနဲ့ကျတော့ အသံတိတ်နေတတ်တယ်။......George Eliot(၅) ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မူနဲ့ လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။....W. Somerset Maughamအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ W. Somerset Maughamနဲ့ အချို့စာရေးဆရာရဲ့ စာအချို့ကို ဒီထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။(၆) အချစ်ဆိုတာ မီးတအိမ်နဲ့ တူတယ်။ အတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ ဆီနဲ့ ထွန်းညှိ မှသာ မီးရဲ့ အလင်းရောင်ဟာ မမှိန်နိုင်ဘူး။ မညိမ်းနိုင်ဘူး။Henry H. Hansa(၇) ယောက်ျားလေးတွေ စီးကရက်တလိပ် သောက်ပြီး စိတ်ဖြေတာဟာ မိန်းကလေးတွေ တခါလောက် အားရပါးရ ငိုလိုက်တာနဲ့ ညီမျှတယ်။Edwards.Mbowe Reighton (၈) မိန်းကလေးတွေရဲ့ နုပျိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ အဲဒါကတော့ အသက်လိမ်ခြင်းပဲ။........ Shakespeare(၉) အချစ်ကို မျက်စိနဲ့ မခံစားဘူး။ အချစ်ကို နှလုံးသားနဲ့ ခံစားတာ။Shannon Fafe (၁၀) မိန်းကလေးတိုင်း ရွေးချယ်မူတခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ယောက်ျားလေးကိုလက်ထပ်ရင် စိတ်မချဘူး။ လူချစ်လူခင်နည်းတဲ့ယောက်ျားလေး ကျပြန်တော့ စိတ်မပါဘူး။..........Mark Twain(၁၁) အချစ်ဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးဘေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ ပန်းတပွင့်နဲ့တူတယ်။ အဲဒီပန်းကို ခူးဖို့ရာ သတ္တိတွေရှိရမယ်။......
Shakespeare(၁၂) အချစ်ဟာ ဘ၀ကို လောင်မြိုက်စေတယ်။ အချစ်ဟာ ရှင်သန်ခြင်းကို စိုပြေစေတယ်။.....Johann W. Goethe(၁၃) လူတွေရဲ့ အချစ်ကို မခံရတာ ကြီးမားတဲ့ ဝေဒနာဆိုးတရပ် ခံရတာနဲ့တူ တယ်။ လူတွေကို မချစ်နိုင်တဲ့သူဟာ ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေတာနဲ့ တူတယ်။Gelinbeier (၁၄) အချစ်ကို နားမလည်ခင်မှာ မိန်းကလေးဟာ မိန်းကလေး မဟုတ်သလိုယောက်ျားလေးဟာလဲ ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူး။.....History Myers(၁၅) ချစ်ခြင်း မေတ္တာဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာ ပျံ့နှံ့နေတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိရင် ဘာသာ၊ သမိုင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်မူနဲ့ အနုပညာဆိုတာလဲ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။Honore de Balzac(၁၆) ငွေကြေးကြောင့် လက်ထပ်တဲ့လူလောက် ယုတ်မာတာ မရှိဘူး။အချစ်တခုတည်းအတွက်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့လူလောက် မိုက်မဲတာ မရှိဘူး။Johnson (၁၇) သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာ တူညီတဲ့ခံစားမူတွေရှိရမယ်။ တယောက်လွတ်လပ်မူကို တယောက်က ၀င်မစွက်ဖက်ရဘူး။ပေါင်းဖက်ရခြင်းကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ ချစ်ခင်မူကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ဒီအချက်တွေကို လက်ကိုင်ထားရင် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး အတွက် အလှဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။Bertrand Russell(၁၈) အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးသလို အချစ်ကို ဆုံးရှုံးဖူးတာက တခါမှ မချစ်ဖူးတာထက်စာရင် ကောင်းသေးတယ်။ Alfred Tennyson (၁၉) အိမ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အဆိုးအပြစ်နဲ့ ကျဆုံးခြင်းတွေ သိုဝှက်ထားတဲ့တခုတည်းသော နေရာဖြစ်သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ချိုမြိန်မူတွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ Bernard Shaw(၂၀) လူ....လူ...လူ...လူဆိုတာ ရယ်မောခြင်းနဲ့ မျက်ရည်ကြားက ချိန်သီးတစ် လုံးဖြစ်တယ်။ Lord Byronအချစ်.....အချစ်.....အချစ်ရဲ့ ရင်ခုန်သံဟာ အကောင်းဆုံး အိပ်ရာဝင်တေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။( ငယ်လေး) ဆောင်းပါးဖတ်သည်။
8/15/2011 တွင် တင်ထားသည်။
Tags:how old r u
At 3yrs ''Mommy I love you''. At 10yrs ''Mom whatever''.
At 16yrs ''My mom is so annoying''.
At 18yrs ''I'm leaving this house''. At 25yrs "Mom you were right''.
... At 30yrs '' Wanna go to mom's house''.
At 50yrs ''Don't wanna lose my mom''. At 70yrs "I would give up everything to have my mom here with me''.
Now How old r u?
You only have one mommy. Post this on your wall if you appreciate your mom.
Sun likes Sunday Moon likes Monday
But I like one day that"s your Birthday.
8/11/2011 တွင် တင်ထားသည်။
နင်ကိုအတိုင်းအဆမဲ့စွာနဲ့ပေးဆပ်မှုတွေပေးချင်ပါတယ် ငါသာချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် နင်ကိုအဝေးကနေမမျှော်လင့်တဲ့ထူးဆန်းမှုတွေပေးချင်ပါတယ်။ ငါ့သာမိန်းမချောလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် နင်ပြန်လာတိုင်းအမောပြေသံပုရာရည်လေးနဲ့အနမ်းတချိူ့ပေးချင်ပါတယ် ငါသာထီးတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ရင် နင်အတွက်ဥတုဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးချင်ပါတယ်။ အခုတော့ငါမှာဘာမှမပိုင်ဆိုင်သလိုငါမှာဘာမှလည်းမ၇ှိပါဘူး။ ကဲဒါတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
စတွေ့တဲ့နေ့လေးကို ပြန်ပြီးမကြည့်ချင်တော့ဘူး အရင်ကလိုနင်အပေါ် ခင်တွယ်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ခွင့်ရှိပါ့မလား။
နင်ကောင့ါကိုအရင်လိုဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးနိုင်ပါ့မလား။ တံတိုင်းလေးခြားနေပြီလေ။ ငါရဲ့လက်ကလေးကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့နေ့လေးတနေ့ ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ အကြောင်းသင့်လို့ငါလက်ကလေး နင်ဘေးမှာ၇ှိနေခဲ့သေးရင်................... တံတိုင်းလေးကတားမြစ်နေပြီလေ အရင်လို နင်၇ဲ့နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်ကိုတော့မမျှော်လင့်ရဲတော့ပါဘူး တံတိုင်းလေးကခိုင်မာနေပြီလေ။ အရင်လိုတွေ့ကြရင်တောင်မှ အရင်လိုနင်ဘေးမှာ နေခွှုင့်ရနေရင်တောင်မှ အရင်လိုဂရုစိုက်မှုတွေပေးနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ငါပျော်ပ့ါတော့မလားချစ်သူရယ်။
နင်အတွက်ဆိုရင်ဘာမှတန်ဖိုးမ၇ှိတဲ့ငါ့အပြုံးကိုတောင်မိုနာလီဇာနဲ့ပြိုင်ရင်အနိုင်ရချင်ပါတယ်။ ငါဟာစုဖုရားလတ်လိုလက်ညှိုးညွန်ရာရေမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ နင်ရဲ့အောင်မြင်မှုလက်တလှမ်းကိုတော့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရှင်စောပုလိုယောင်္ကျားတိုင်းအပေါ်အာဏာစကားမသက်ရောက်ပေမဲ့ သစ္စာရှိပါဆိုတဲ့စကားတခွန်းတော့နင်အပေါ်သက်ရောက်ခြင်း၇ှိပါစေ။ ငါ့အချစ်က ရိုမိယို ဂျူးလိယက် လိုမပြောင်မြောက်ပေမဲ့ သူတို့ထက်မလျော့တဲ့အချစ်နဲ့ပေးဆပ်နေမှာကိုတော့ယုံပေးပါချစ်သူရယ်.။
8/3/2011 တွင် တင်ထားသည်။
“မလှတာ ကျွန်မအပြစ်လား မောင်ရယ်” ♥♥နှလုံးသားတစ်စုံမြေမြုပ်သဂြိုလ်လိုက်ပြီ♥♥ ♥နှလုံးသားထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဖရီးဆော့ဝဲလ် တစ်ခု♥ ♥မပြောဖြစ်ခဲ့မိဘူး တိတ်တခိုးကြိတ်ပိုးခဲ့ရသူကို♥ ♥အရေးပါတဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့ ဖန်တီးချက်များ♥ ♥နှုတ်ဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့♥ ၀၀၉ ခုနှစ် ၁၀ တန်း မြန်မာစာ မေးခွန်းလွှာ 101010 ၂၀၂၀ ရောက်ဝန်ဆောင်မှု A to Z Day How Old R U I HATE YOU love is Name Not for Sale PUNK ဟုခေါသည်။ ကံကြမ္မာ=လိုင်းကားဒါရိုက်ဘာ ကယ်တင်ရှင် ကာလ ဒေသ ပယောဂ ကိုကိုစိတ်ကူးယဉ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်း ချစ်သူစာဖိုမူး ချစ်သူဆီသို့ဝန်ခံခြင်း ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာဖြစ်လို့ ချောကလက် လက်ဆောင်ပေးကြသလဲ ချစ်သူရေ ချစ်နေတုန်းကတော့ပျော်စရာအတိပေါ့ ငယ်ရှိမယ့်နေရာ ငယ်ပေါင်း ငယ်မေးမယ် ငယ်လေးဆန္ဒ ငယ်လေးသိခဲ့ရသောအချစ် ငရဲသားနဲ့ နတ်သား ငါ ငါတို့ အမေ ငါသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငှဲငှဲငှဲ(ဟီးဟီး) စိတ် စိတ်စိတ်ပါကွယ် စိတ်မပျက်နဲ့ကွယ်ကလေးရယ် စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းများ ဖြေကြည့်ပါဦးနော်(၂) ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြရင် ဆုးံဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေ ဆုတောင်း တံတိုင်း တခါတုန်းကသူကပြောတယ် တခါတလေ တချို့က အချစ်ကို ဒီလိုပြောကြတယ် တစ်ရက် ၅၀၀စား တတ်သည့် ပညာ မနေသာ။ တရားရုံတော်သို့ဦိးတိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ တွဲဖက်မစားသင့်သောအစာများ ထာဝရ သူငယ်ချင်း ထာဝရ အဖော် ထိုလူမျိုးကိုငယ်လေးဟုခေါသည်။ ထိုကြောင့် ဒါပဲယူတော့နော် ဒါလည်းဟုတ်သားပဲ ဒီလောက်ပဲတက်ဖို့လိုတယ် နာတဖျားသာလိုလျှင် ဖိတ်စာ ခြစ်ရင်မထွက်သောမှင် ခြားနာချက် ပြည့်စေသော် မြင်ပါဦိး ဘဝဖော်ဆိုတာ ဘာ ဘီယာအဖြတ်တော်သူ မချစ်တက်ရင်သိပ်ကောင်းမယ် မင်း=ဘာလဲ မင်းထူမှထမယ်ထမယ် မင်းရင်ဘတ်ထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ မင်းသိထားစမ်းပါ မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် မင်းအတွက်သတင်း မင်းကြောင့်ပေါ့ မနက်ဖြန် မိန်းကလေးဆိုသော မိုးလေ၀သအထူးသတင်းကြေညာချက် မျက်မမြင် မှန်တယ်ဟုတ် မှားတက်ပါ့လေ ရင်တွင်းဖြစ် ရင်နာတယ် လည်းမလွမ်းချင်ဘူးငါ့မျက်ရည်လေးမကျနိူင်ဘူးတစိမ်းတယောက်လိုငါ~#့ကို လတ်တလော လ္ဘက်ရည်သောက်သူများ လမ်း လူညာတစ်ယောက်ရဲ့သစ္စာ လူပျိုကြီးစစ်စစ်ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေများ သင် သူ့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် …… သင့်အတွက်သိစေရန် သတိ- မလုပ်ရ။ သတိရမိဆုံးကနင်ပါ သိပ်ခံစားနေရရင် သူ့အမေ ရင်ကျိုးအောင် သူငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုကွဲကွာသွားကြသလဲ… နှလုံးသားရဲ့လျို့ဝှက်အပြုံး ကြယ်စဉ်တခုရဲ့ပဲ့တင်ချိန် ကြက်ဖလောက်တော့သနားတာပေါ့ နောက်ဆုံး ထင်မြင်ချက်များ